Safal Khabar - पायल्स के हो ? जानौं पायल्सका बिरामीले खान नहुने कुराहरु
पायल्स के हो ? जानौं पायल्सका बिरामीले खान नहुने कुराहरु
शुक्रबार, २० असार २०७६, १८ : ३६
काठमाडौं । दिसा गर्दा रगत आउँछ, मासु पलाएको छ, दुख्छ, फाटेको, फुलेको या सुन्निएको छ, मलद्वार चिलाउँछ लगायतका समस्या आम मानिसमा सुनिन्छ । कसैको त पीप बग्छ, अंगुरका झुप्पाजस्तो पलाएको छ, रातो डल्लो छ भन्ने सुनिन्छ । यही रोग नै पायल्स हो । कसैलाई यो रोग लाग्दा रगत आउछ भने कसैलाई आउदैन ।